IPFire 2.23 iri pano kugadzirisa kusagadzikana kweIntel's MDS | Linux Vakapindwa muropa
Iyo inozivikanwa firewall yeLinux IPFire yakagadziridzwa kupera kwesvondo rapfuura. Kubva pakuonekwa kwayo, iyo nyowani vhezheni ndeyekuburitswa kwechimbichimbi kwakaitika zvakanyanya kudzivirira chero munhu uye chero chinhu kubva mukushandisa zvakasarudzika Intel MDS kushomeka. IPFire 2.23 Core Kugadziridza 132 ndeye kugadzirisa kugadzirisa, zvinoreva kuti hapana anozivikanwa maficha matsva anodarika mabug fixes, rutsigiro zvinowedzerwa, uye zvigamba zvekuchengetedza.
IPFire 2.23 inosvika ne yakagadziridzwa linux kernel, kunyanya v4.14.120 yeiyo system kernel. Linux 4.14.120 yatove inosanganisira zvese zvinodiwa kuti zvigadzirise zvinotaurwa neIntel MDS, pakati pazvo tine RIDL, Kudonha uye Zombieland. Kune rimwe divi, inosanganisira yakagadziridzwa intel-microcode firmware iyo vhezheni yacho inosvika nenhamba 20190514 (Chivabvu 14, 2019). Yakaremadzawo SMT nekumisikidza pane ese akanganisa mapurosesa kudzikisa njodzi yekukundikana isingakwanise kugadziriswa, zvichikonzera kuita kwakakosha kurova.
1 IPFire 2.23, kuvhurwa kwechimbichimbi
1.1 Zvimwe zvinhu zvitsva mushanduro iyi
IPFire 2.23, kuvhurwa kwechimbichimbi
Intel haichazoburitsazve imwe microcode pasina processor, zvinoreva kuti komputa yedu inogona kuramba iri panjodzi. Kuzvidzivirira zvakanyanya kunoenderana nevagadziri vanopa masisitimu anoshanda, avo vanofanirwa kusunungura zvigamba kugadzirisa matambudziko.
Iyo itsva vhezheni inowedzera a nyowani GUI iyo inozivisa vashandisi nezvekurwisa kupi kunogona kuve nengozi kune yedu Hardware uye kana kana kwete chiito chakatorwa. IPFire 2.23 inouyawo neiyo nyowani graphical interface iyo ichatibvumidza isu kugadziridza VLAN maficha ezoni, pamwe nemukana wekugadzirisa nzvimbo mubridge mode.
Zvimwe zvinhu zvitsva mushanduro iyi
Suricata IPS inotsigira masystem nema processor epfuura anopfuura gumi nematanhatu macores.
GCM modhi ikozvino yashandiswa pamberi peCBC yewebhu mushandisi interface yekuvandudza kuchengetedza kwayo.
OpenVPN yakagadziridzwa kuitira chengetedzo huru.
Iwo maSuricata marejista akanyoreswa ave kuoneka muchikamu cherejista chehurongwa.
Yakagadziriswa muchinjika-saiti kunyorera kusagadzikana muKutapwa Portal.
Zvikamu zvakagadziridzwa kune yazvino vhezheni, senge:
Iyo Wireless AP Plugin yakagadziridzwa kuti ivandudze rutsigiro rweDFS.
Otomatiki Sarudzo uye Management Dhizaini Dziviriro zvave zviripo
IPFire 2.23 Core Gadziriso 132 inowanikwa pa Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » IPFire 2.23 yakasvika kugadzirisa Intel's MDS kusagadzikana